हिन्दी सिनेमाकी चाँदनी - यात्रा सन्दर्भ - साप्ताहिक
भारतीय रजतपटको आकाशमा अब चाँदनीलाई हेर्न पाइनेछैन । हिन्दी र अरू धेरै क्षेत्रीय भाषामा अभिनय गर्ने श्रीदेवी (पूरा नाम : श्रीअम्मा यंगर अय्यपन) को दुबइको एउटा होटलमा निधन भयो । १३ अगस्ट १९६३ मा जन्मिएकी श्रीदेवीको निधन सुरुमा कडा ह्दयाघातका कारण भएको बताइएको थियो । थप अनुसन्धानपछि होटलको कोठाको बाथटबमा डुबेर उनको निधन भएको नयाँ समाचार आयो । उनले त्यतिबेला अल्कोहल पिएको पनि बताइयो । त्यसको भोलिपल्ट दुबई प्रहरीले यसलाई एउटा ‘एक्सिडेन्टल डेथ’ नै मान्यो । यता श्रीदेवीको निधनमा नेपालीहरूको प्रतिक्रिया जसरी आयो त्यो एक हिसाबले आश्चर्यजनक थियो ।
एकैछिन् श्रीदेवीको निधनमा उनका फलोअर्स, शुभचिन्तक तथा कला मर्मज्ञहरूको अभिव्यक्ति हेरौं :
श्रीदेवीको निधनले भावुक भएका प्रविन अधिकारीले फेसबुकमा लेखे— कस्तो होला म मर्ने दिन ? को–को होलान् मलामी ?
प्रविनका मलामी धेरै होलान् । उनका अझै धेरै अनुयायी भेटिनेछन्, अनि पत्रकार वीरेन्द्र केएमलाई श्रीदेवीको निधन अविश्वसनीय लाग्यो । मृत्यु साँच्चै अविश्वसनीय नै हुन्छ ।
विषाद मनको अभिव्यक्ति थियो, ‘रूपको घमन्ड गर्नेहरूले जान्नुपर्छ, श्रीदेवीले पनि मर्नुपर्दो रहेछ ।’ विषाद मनको यो प्रहार अन्यत्र नै लक्षित थियो शायद : कहीं पे इसारा, कहीं पे निसाना । मज्जा आयो ।
अमृता लम्साल मिडियाकर्मी हुन् र समाजसेवी पनि । श्रीदेवीको निधनमा उनको जस्तो प्रतिक्रिया आयो, त्यो विलक्षण थियो । त्यो प्रतिक्रियाले अमृताको उमेर केही नभए पनि १५ वर्ष घटायो होला । श्रीदेवीले अभिनय गरेको फिल्मको गीतबाट सुरु गरेकी छिन् अमृताले आफ्नो समवेदना, ‘रंग भरे बादलसे, तेरे नैनोंकी काजलसे, मैंने इस दिलमे लिखदिया तेरा नाम...रेस्ट इन पिस । लाइफ इज सो...... अनसर्टेन । दुई घण्टाअघिसम्म उनकै सिनेमा हेर्दै थिएँ...।
अनि, प्रतिक्रियामा संगीता मरहट्ठाले लेखिन्– ह्दयविदारक, अविश्वसनीय ।
अनुज कुलुङले श्रीदेवीको निधनमा व्यक्त गर्ने शब्दहरू भेटेनन् । उनको मन भारी भयो । अनुजलाई श्रीदेवीको सिनेमा इंग्लिस–विंग्लिस मन परेको थियो । बुद्रोस लिम्बूको भनाइ थियो, ‘के भर जिन्दगीको । श्रीदेवीजस्तै चुपचाप स्वर्ग प्रस्थान गर्ने हो कि के हो ? यस्तै आश्चर्यजनक मृत्यु होस् ।’
हिन्दी सिनेमामा श्रीदेवीको उत्थान चमत्कारिक थियो । नेपालका प्रबुद्ध व्यक्तित्व निरन्जन कोइरालाले फेसबुकमा लेखेका छन्— सबैभन्दा पहिले त आफैंलाई माया गर । आफ्नो छायाँले आफैंलाई डोमिनेट गर्ने अवस्था आउन नदेऊ । श्रीदेवीलाई पुरै पिंढीले आउने लामो समयसम्म बिर्सनेछैन । उनले मिस्टर इन्डियामा चार्ली च्याप्लिनको जस्तो अभिनय गरेकी थिइन् । त्यस्तो अभिनय गर्न अहिलेसम्म कुनै नायिकाले सकेका छैनन् । साँच्चै नै विलक्षण थिइन् श्रीदेवी । उनी तामिल, तेलेगु, मलायालम तथा कन्नड सिनेमामा पनि उत्तिकै लोकप्रिय छिन् ।
श्रीदेवी चार वर्षको उमेरमा तमिल सिनेमा थुनाइवनमा अभिनय गरेर अभिनय जगत्मा प्रवेश गरेकी थिइन । उनकी छोरी जान्हवी कपुरलाई करन जोहरले चलचित्र धडकको अभिनेत्रीका रूपमा सिनेमा संसारमा ल्याउँदैछन् ।
श्रीदेवीको पहिलो विवाह अभिनेता मिथुन चक्रवर्तीसँग १९८५ मा भएको थियो । त्यो विवाह तीन वर्ष पनि टिकेन । उनीहरूले डाइभोर्स गरे । त्यसपछि १९९६ मा उनले फिल्म निर्माता तथा अनिल कपुरका दाजु बोनी कपुरसँग विवाह गरिन् । भारतमा महिला अभिनय प्रमुख भएका अभिनेत्रीमा उनी एक्लै थिइन् । श्रीदेवीको अभिनयका बारे सीएनएनको टिप्पणी थियो, ‘बलिउड संसारको सबैभन्दा ठूलो सिनेमा उद्योग हो भने श्रीदेवी त्यसकी महारानी हुन् ।’
हिन्दी सिनेमामा उनको सबैभन्दा पछिल्लो सिनेमा थियो— सोलहवाँ सावन । त्यसपछि उनी सिनेमा खेल्ने मुडमा रहिनन्, तर पर्दामा आउन पनि छाडिनन् । मम उनको पछिल्लो सिनेमा हो ।
चाँदनी ओ मेरी चाँदनी...अब स्मृतिमा मात्र ।